PressReader - Isolezwe: 2018-09-13 - Ziyadukisa izinsolo zabamatekisi eMnambithi
Ziyadukisa izinsolo zabamatekisi eMnambithi
Isolezwe - 2018-09-13 - IMIBONO -
MHLELI: Ngithatha leli thuba ukuphawula mayelana nemibiko ephume kwabezindaba, okubalwa nephephandaba lakho, mayelana nezinsolo ezenziwe ngabemboni yamatekisi eMnambithi.
Izinsolo ezenziwe yimboni yamatekisi, ikakhulukazi usoseshini waseKlipriver nenhlangano ezibiza ngeNPA, ziyashaqisa futhi zidukisa isizwe. Okubuhlungu ngalezi zinsolo wukuthi kusetshenziswa igama likaNgqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi KwaZulu-Natal, uMnuz Mxolisi Kaunda, ngendlela engafanele.
Okungamukelekile kakhulu wukuthi kwenziwe izinsolo ezikhomba umhlonishwa uKaunda njengomuntu osebenza ngokuchema noma ukwenzelela uma enza umsebenzi wokungenelela embonini. Selokhu uKaunda eqalile kulo Mnyango akakaze asebenze ngokwenzelela futhi selokhu asebenza wenza ngokulawulwa wumthetho.
Kumqoka ukuba siqale ngokukhumbuzana ukuthi indawo yaseMnambithi ibivele inezinkinga, endaweni yaseSidakeni naseZakheni, lapho kube khona nombango oholele ekufeni kwenqwaba yabantu.
Umsebenzi wokudala ukuthula kule ndawo waqalwa nguMhlonishwa uWillies Mchunu osenguNdunankulu. UKaunda ufike wawuqhuba lowo msebenzi ngobuqotho nangokwethembeka saze sadamba isimo futhi kwaba khona ukubuyisana kwizinhlangothi ebezibhekene ngeziqu zamehlo.
Akusikhona eMnambithi kuphela lapho ehole khona izinhlelo zokudala ukuthula kodwa ezindaweni eziningi ezifana neNewcastle, KwaNongoma, KwaMaphumulo/ KwaDukuza, ePort Shepstone naseMgungundlovu, ukubala nje ezimbalwa, ngezinye zezindawo ebezinezinselelo kodwa manje esezinozinzo.
Odabeni lwaseMnambithi, kuyinto esezithebeni zomphakathi ukuthi kusukela ngo-2014 bekukhona ukubulawa kwamalungu ezinhlangano zamatekisi ezisebenza kule ndawo naseGoli.
Lo mbango kusuka ngaleso sikhathi kuza kuDisemba 2017, udlule nemiphefumulo engaphezulu kuka-61. UKaunda wajuba ithimba loMnyango ukuba lihambele kule ndawo ukuqala izingxoxo. Nokho alitholanga ukwesekwa okwanele.
Kwaze kwaphoqeleka ukuthi aziyele mathupha kule ndawo. Indaba eyabe iwumnyombo wombango kwaba ukuthi iKlipriver Taxi Association ithathe udaba lwemizila yamabanga amade yaluyisa enkantolo.
Inkantolo yabe seyikhipha isinqumo sesikhashana sokuvuna uKlipriver ukusebenza leyo mizila. UNgqongqoshe noMnyango babebaliwe emaphepheni enkantolo futhi yathi noma ikhipha isinqumo saba ngabokuqala ukusihlonipha, okubalwa nokubiza imihlangano nezinhlangothi ezithintekayo ukuze sonke sihambisane nomyalelo wenkantolo.
Ngesikhathi kusaqhubeka lezi zingxoxo sathola umbiko wokubulawa kwePhini likaSihlalo weKlipriver, uMnuz Mzikayifani Ngobese, ehamba nendodakazi yakhe nabaqaphi bakhe. Kuleso sehlakalo kwalimala nothisha abane, umsebenzi wesikole nomgibeli oyedwa nabo bashona ngemuva kokuba imoto ababehamba ngayo ishayisane neyabe ihamba uNgobese.
Lokhu kwaphoqa ukuthi ungqongqoshe asebenzise amandla awanikwe iSigaba 91 somthetho iNational Land Transport Act. Lo mthetho ugunyaza ungqongqoshe ukuthi athathe izinyathelo ezinqala uma ebona isimo sibhebhetheka futhi sibeka engcupheni impilo yabantu.
Lesi sinqumo sathathwa ngemuva kombiko onzulu owenziwa esigungwini sikahulumeni. Njengoba umthetho uyalela, lesi sinqumo safakwa kwigovernment gazette futhi akekho noyedwa kulezi zinhlangano ezikhona owasiphikisa.
Ngisho sesixegiswa isinqumo ngemuva kokubonisana nomphakathi, yavulelwa iKlipriver ukuba isebenze imizila yangaphakathi eMnambithi. Lokhu kwabe kungenxa yokucabangela umphakathi nabo abanikazi bemboni njengoba abanye izimoto zazingasakwazi ukukhokha. Nososeshini iSizwe waxegiselwa ukuthi uqhubeke nokusebenza umzila waseGoli kuphela ngoba wabe ungekho emizileni esenkantolo neyingxenye yombango.
Konke lokhu kwenzeka ngokubonisana nobuholi beSantaco futhi akukho nowodwa umhlangano oke wabanjwa bengekho abaholi bale nhlangano yamatekisi ezingeni lesifundazwe.
Okumqoka wukuthi selokhu uKaunda athatha isinqumo sokuvala ukusebenza kwamatekisi kule ndawo akukaze kufe noyedwa umuntu. Namanje sisamile kwelokuthi labo soseshini bobabili, kumele bakhe indlela yokusebenzisana ukuze bakwazi ukusebenza ngokuthula, kuphele ukubhekana ngeziqu zamehlo.
Kuwona wonke umsebenzi esiwenzayo, akukho lapho uKaunda noma umnyango uke wasebenza khona ngokuchema nangokwenzelela ngoba siyaqonda ubucayi bomsebenzi esibhekene nawo futhi sihlale sibuswa wubuqotho nokusebenza ngokuthembeka. Kwanele Ncalane OPHIKWENI LWEZOKUXHUMANA EMNYANGWENI WEZOKUTHUTHA – KWAZULUNATAL